Kuunza mota kubva kuNetherlands kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Tanga kutaipa kutsvaga kwako pamusoro uye pinda kudzoka kunotsvaga.
USA kuenda kuUK
Zororo reNyika kuUK
TENGA MOTA INOBVA KUK UK IN NZ
Kutumira mota kuUK
Kuongorora Kwemotokari UK
Vanotungamira Mota dzeUK Vanotungamira kuUK
Unoda ruoko kupinza mota yako kubva kuNetherlands kuenda kuUnited Kingdom?
GETA A QUOTE HERE
Kuunza mota kubva kuNetherlands kuenda kuUnited Kingdom
Yangu Mota Kunze ine hupfumi hwechiitiko kupinza mota kuUnited Kingdom
Yedu makotesheni akazara akabatanidzwa uye akavakirwa zvachose pane zvaunoda. Unogona kuziva zvakawanda nezve maitiro ekupinza mota yako pane ino peji rino, asi usazeze kupinda mukutaurirana uye utaure nenhengo yevashandi.
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuNetherlands dzinoendeswa kuUK nevaridzi vadzo uye vatove pano, vachingoda kuitisa kunyoreswa kwekunze neDVLA. Isu tinogona zvakadaro kubata nzira yese yekutora mota yako kubva kune chero nhengo yenhengo yeEU kuenda kuUK.
Isu tinonyanya kutakisa mota nemugwagwa munzira dzakazara dzeinishuwarenzi dzekutakura, asi zvakare tinopa roll pane roll kubva pakutakura masevhisi kubva kune dzimwe nzvimbo dziri kure.
Nhungamiro Yemutero Yekunze
Paunenge uchipinza mota kubva kuNetherlands kuenda kuUK, unogona kuita zvachose kubhadhara mutero uchipa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Kana uchinotora mota nyowani kana ingangoita nyowani, iyo VAT inofanirwa kubhadharwa muUK saka ndokumbira usazeze kumhanya chero mibvunzo yapfuura patiri tichironga zvekubhadhara mutero usati watenga.
Pre-kunyoresa Rudzi Kubvumidzwa uye Kugadziridzwa
Mota Dziri pasi pemakore gumi
Paunosvika kuUK, mota yako inoda kutevedzera UK mhando mvumo. Isu tinogona kuita izvi nemaitiro anonzi kubvumirana kana kuburikidza neIVA kuyedzwa.
Mota yega yega yakasiyana uye mugadziri wega ane zviyero zvakasiyana zvekubatsira vatengi vavo kuburikidza nehurongwa hwekunze, saka ndokumbirawo ubvunze kuitira kuti tikwanise kukurukura nezvekumhanyisa kwakanyanya uye mutengo sarudzo yemamiriro ako ega.
Isu tinofambisa maitiro ese aya pachinzvimbo chako, kunyangwe izvo zviri kubata nechikwata chevanyengeri chemugadziri wemotokari yako kana Dhipatimendi reZvekutakura, kuti iwe ugone kuzorora neruzivo rwekuti iwe uchanyoreswa zviri pamutemo neDVLA munguva pfupi kwazvo inogoneka.
Ruoko rweruboshwe rwekutyaira mota kubva kuNetherlands zvinoda zvimwe zvigadziriso, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira paawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Isu takavaka yakawandisa katarogu yemagadzirirwo uye mamodheru emota isu atinotora kunze kuti tikwanise kukupa iwe nekukurumidza mutengo kukosheswa kweizvo yako yega mota inoda.
Mota Dzinopfuura Makore Gumi Ekare & Dzakanaka Mota
Dzinopfuura gumi-makore-makore mota uye zvekare zviri mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kugadziridzwa kusati kwanyoreswa. Izvo zvinogadziriswa zvinoenderana nezera asi zvinowanzo kuve kumwenje uye kumashure kwemambure emwenje.
UK Nhamba Plates & DVLA Kunyoresa
Sezvo isu takabudirira kukumbira vatengi vedu kuti vakwanise kuwana yedu pachedu Yangu Car Car yakatsaurirwa DVLA Account Manager, pakupasa chikamu chekuyedza, kunyoreswa kunogona kubvumidzwa nekukurumidza kupfuura dzimwe nzira.
Tinogona ipapo kukodzera yako nyowani UK manhamba mahwendefa uye kuve nemota yakagadzirira chero kungaunganidzwa kana kuendeswa kunzvimbo yaunosarudza.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kupinza mota kubva kuNetherlands kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe, taura nesu nhasi pa +44 (0) 1332 81 0442.
Isu tinopa yakazara Netherlands mota yekunze sevhisi
Tsika mapepa, kupinza mutero nemitero zvese zvinobatwa
Yakazara inishuwarenzi kutakura kuenda kunzvimbo yedu.
Zvakakosha kuti mota yako ive UK nzira yakanyoreswa.
Mota yako yaendeswa kwayinofanira kunge iri.
Ona dzimwe dzazvino mota dzatakatenga
Iyi mhosho inopararira inongowanikwa kuZvipress admins
Iko kukanganisa: Hapana zvitupa zvakawanikwa.
Ita shuwa kuti iyi account ine zvawanikwa zvinowanikwa pa instagram.com.
MHANDO DZEMOTO DZINOBVA KUNETHERLANDS
Makumi emakore echiitiko
Nyanzvi yekuve nechinhu kubva supercar kusvika supermini inopinzwa uye yakanyoreswa kuUK
Nemakumi emakore ekupinza mota uye neruzivo rwekutengesa, hapana mamiriro Tim asina kubata nawo
KUSIMBISA BHUKU BHIZINISI
Inotengesa bhizinesi, inobata nemibvunzo, vatengi vevatengesi uye inotyaira bhizinesi munzvimbo nyowani.
Vikki anochengeta iwo macogs achitendeuka mubhizinesi uye anotarisira ese ehutariri mabasa ane chekuita nebhizinesi.
DZENYIKA DZENYIKA DZEMAOKO
Phil anobata nevatengi vanobva kumativi ese epasi uye anovabatsira nhanho dzese dzenzira.
Kunyoresa uye Kuyedza
Jade inyanzvi mukuyedza mota uye kutumira kunyoreswa muUK.
Mahwendefa asvika, mazhinji nekutenda nerubatsiro rwako rwese, wanga uri mufaro kubata nekambani yako uye ini handizove nedambudziko rekuparadzira izwi.
Ingori katsamba kekukurumidza kutaura kukuru kwekutenda uye nevamwe vese timu. Ndanga ndichishushikana nemota, ndinofunga waizviziva izvo !! Kuudzwa nhasi kuti kwaive kuburikidza neiyo IVA bvunzo yaingova akanakisa nhau. Ndatenda futi, waita basa rakakura uye ndinotarisira kutaura nekukuonai mese mushure mekuzorora kwemafaro. Happy Xmas uye New Year!
Ndinokutendai nekuchengeta kupinza kwemota yangu. Ndinoziva zvaive zvakanyanya kunetsa, asi nekuda kwevatauri vako vakakwanisa kuwana zvikamu zvakanaka uye kugadzirisa nyaya dzese nekukurumidza uye zvinogutsa.
Mazhinji ndinokutendai uye nechikwata nekuzviitira izvi nekukurumidza uye zvine mutsindo. Kana ndiine rombo rakaringana kuti ndipinze chero imwe mota dzakanaka mune ramangwana ndichave nechokwadi chekushandisa masevhisi ako zvakare.
Tinotenda nekuita basa rakanaka mukuunza mota yedu kuUK uye kupedzisa gadziriro dzakakodzera. Tichaedza kutumira sevazhinji vatengi veDubai nzira yako sezvinobvira.
Yangu Mota Kunze, Trent Lane, Castle Donington, Derby, DE74 2PY.
KUTI Uwane QUOTE KUTI UPINZISE KANA KUTAI MOTA YAKO FUNGA KUZADZISA FOTI YOKUDZIDZA FOMU
Kune mamwe mimwe mibvunzo ndapota fona +44 (0) 1332 81 0442
Tora mutengo wekupinza mota yako neMy Car Import
Yangu Mota Kunze yakabudirira kuita zviuru zvemotokari dzinotengeswa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira Kwese uko mota yako iri pasi, isu tichakwanisa kubata nhanho dzese dzekupinza uye kunyoresa maitiro. Isu tine pasirese pasirese evamiriri pane kondinendi yega yega kutipa isu kusvika parizvino ruzivo rwemuno uye chivimbo pese panowanikwa mota yako.
Tisu chete mutengesi wemota muUK kuti takaita mari yakawanda munzvimbo yeDVSA yakatenderwa yekuyedza saiti yedu. Izvi zvinoreva kuti vaongorori veDVSA vanoshandisa yedu yepayeti yekuyedza nzira yekuburitsa yega mvumo yemhando kune edu vatengi mota. Nekuvapo kwedu kwepasirese uye kuzvipira kunoenderera kuzvinhu zvese zvekuteerera kweUK, isu tiri vatungamiriri vemusika mumunda medu.
Dzvanya apa kuti uwane Quote
Usamboona uyu meseji zvakare
Tora mutengo kuti upinze uye kunyoresa mota yako muUnited Kingdom?
Yangu Mota Kunze yakabudirira kuita kunyoreswa kwezviuru zvemotokari dzinounzwa kunze. Kwese uko mota yako iri pasi, isu tichakwanisa kubata nhanho dzese dzekupinza uye kunyoresa maitiro.
Nekuvapo kwedu kwepasirese uye kuzvipira kunoenderera kuzvinhu zvese zvekuteerera kweUK, isu tiri vatungamiriri vemusika mumunda medu. Kunyangwe iwe uri kuendesa wega mota yako, mukutengesa kuendesa akawanda mota, kana kuyedza kuwana yakaderera vhoriyamu mhando mvumo kune iwo mota auri kugadzira, isu tine ruzivo uye zvivakwa kuzadzisa zvese zvako zvaunoda.
Usazeze kuzadza fomu redu rekukumbira zvitauro kuti tikwanise kupa chitauro chekuunzwa kwemotokari yako kuUnited Kingdom.
Dzvanya apa kuti uzadze fomu yekukumbira chikumbiro
Kwete, ndatenda, ini handifarire!